iOS 11.2 inosanganisira kukanganisa kweKeKKit, asi izvozvi zvagadziriswa | IPhone nhau
Vanoramba vari mazuva akaipa eApple uye chengetedzo. Muvhiki imwe chete tawana chakakomba chengetedzo mu macOS iyo inogona kubvumidza chero munhu kutora komputa yako, mushure meimwe imwe iOS 11.1.2 chikanganiso chakasiya iyo iPhone nePadad isingagone kushandiswa muna Zvita 2, uye ikozvino chitsva chekuchengetedza chikanganiso muKeKKit izvo zvinogona kubvumidza mumwe munhu kuwana zvishandiso zvako kubva kunze.
tichifunga kuti HomeKit ine emagetsi concertator uye ine mota mota garaji masisitimu, kutyora kwekutyora kunogona kupa chero munhu mukana kudzimba dzedu, inova nyaya yakakomba. Apple, ichiziva nezvekukundikana kwenguva yakati, iri kushanda pairi uye nezvayakaita, izvozvi, inotora mhinduro shoma izvo zvinodzivirira mumwe munhu kutora mukana wekutadza.
Kukundikana kuri padanho remaseva eApple, kwete zvishandiso zvacho, saka zvinongoda chete kuti kambani igadzirise mukati mechikamu chayo kuitira kuti vese vashandisi vagadzikane zvakare neKeKKit Mhinduro yacho inosvika munguva pfupi musoftware, pamwe iri rinouya vhiki, asi ikozvino Apple yabvisa kure kure kuwana kwevashanyi vashandisi kuKeKKit, Zvinoita kunge chinhu chakakosha kuti mumwe munhu atore mukana wekutadza uku.
Hatizive zvimwe zvakawanda nezvazvo, asi isu tinoziva kuti 9to5Mac yakanga ichitoziva nezve kukundikana kubva muna Gumiguru, uye kuti Apple yaive ichizvizivawo. Ino nguva zvinoita sekunge maitiro anga akafanira zvakanyanya kupfuura nekutadza kwemacOS. Isu tatoziva kuti mutongo uripo asi hapana njodzi mushure mekuyerwa kweApple, zvichimirira wekupedzisira
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11.2 inosanganisira kukanganisa kweKeKitKit, asi izvozvi zvagadziriswa
hahahaha uye iwe unovatenda, zvishoma nezvishoma maapuro anoora, kunyangwe zvichirwadza kana kwete. Kubva munzira yavanofukidza nayo zvinhu kubva kuCupertino ndinofunga Microsoft haisi XD